Shiinaha YF-2016 Soo-saare iyo Soo-saare | Yifan
Miisaska kafeega ee kor-u-kaca ayaa na siiya wax aad u qaali ah oo inta badan la iska indhatiro: in yar oo keyd ah oo dheeri ah oo inta badan sameeya farqiga oo dhan. Waa mid ka mid ah sababaha miisaska qaxwada leh khaanado ku dheggan iyo kulaylku ay caan u yihiin oo loo qadariyo.
Miisaska kafeega ee kor-u-kaca ayaa na siiya wax aad u qaali ah oo inta badan la iska indhatiro: in yar oo keyd ah oo dheeri ah oo inta badan sameeya farqiga oo dhan. Waa mid ka mid ah sababaha miisaska qaxwada leh khaanado ku dheggan iyo kulaylku ay caan u yihiin oo loo qadariyo. Naqshadaha qaar fikraddan waxay u qaadaan heerka xiga waxayna leeyihiin muuqaalo dusha sare u qaada oo loo isticmaali karo sida dusha shaqada. Waxay u egtahay in miis yar oo ka kooban kombiyuutarkaaga gacanta lagu dhex qariyey meel bannaan oo muuqaal ah.
Tani waxay umuuqataa miiska qaxwada caadiga ah ... ilaa aad ogaato inaad sare uqaadi karto una adeegsan karto sidii miiska cuntada. Jadwalka sidoo kale wuxuu leeyahay armaajo furan iyo keyd si loogu muujiyo qurxinta dusha iyo hoostiisa waxaa jira qol kale oo qarsoodi ah oo lagu keydiyo.
Waxay kuxirantahay naqshad yar oo leh xariiqyo nadiif ah iyo qaab bir bir ah. Dusha sare ayaa kor loo qaadi karaa si loo muujiyo qol qarsoodi ah oo qarsoodi ah oo ku ag yaal khaanad yar. U isticmaal sida dusha yar ee shaqada ama dusha sare ee ku habboon buuggaaga ama cuntada fudud.
La wadaag khibrad miiska kafeega kor u qaadista qabow qof ama isticmaal labada dusha naftaada, ujeedooyin kala duwan. Marka aadan u baahnayn miis, u isticmaal tan sidii miiska qaxwada caadiga ah. Waxay u egtahay mid qurxoon oo casri ah xitaa waxay ku siinaysaa meel aad ku keydiso waxyaabo yar oo aragga ka baxsan.
Habka kor-u-qaadista ayaa si habsami leh loogu dhejiyay miiskan qaxwaha casriga ah wuxuuna u oggolaanayaa inuu u ekaado muuqaal iyo muuqaal xilli kasta. Isla mar ahaantaana waxay muujineysaa qaybo wax ku ool ah oo loogu talagalay joornaalada, buug aad u jeceshahay, meelaha fog ama laptop.
Way adag tahay in la qiyaaso in miiskan qaxwada caatada ah uu leeyahay wax la qariyo. Sare-u-qaadistu si kastaba ha noqotee waxay si kale u leedahay. Kaliya waa lakabka sare ee khafiifka ah ee kor u qaadaya, oo muujinaya meel yar oo hoose oo aad u weyn oo ku filan laptop. Waad ku xiri kartaa meesha sare sedex meelood oo kala duwan, iyadoo kuxiran waxa aad u isticmaaleyso iyo dookhaaga shaqsiyeed.
Xiga: YF-H-801 Kaydinta Jikada Kaydinta Golaha Kaydka oo Dahab ah
Miiska Qaxwada Qolka Nolosha Casriga ah
Jadwalka Miiska Qaxwada
Miiska Qaxwada Raaxada
Shaxda Kafee Marmar
Miiska Qaxwada Casriga ah
Miiska Qaxwada ee Muraayadda Silver
YF-2001 Miisaska Kafee ee Sare-Sare oo Ka Yaabsanaya Yo ...